Goggle Vagadziri uye Vanotengesa - China Fekitori - Quanzhou waimaoniu Export uye Export Trade Co, Ltd.
Musha > Zvigadzirwa > Denda rekudzivirira kwezvirwere > Goggle
Izvi zvinotevera ndezveGoggle zvine hukama, ndinovimba kukubatsira kuti unzwisise Goggle zviri nani.
Kushandiswa kwemagogo uye masiki ekudzivirira
1. MaGoggles kana machira echiso anofanirwa kushandiswa mune anotevera zviitiko:
a) Munguva yekuongororwa uye kurapwa uye nekuvhiya mabasa, ropa revarwere, mvura yemuviri, makenduru, nezvimwewo zvinogona kutemwa.
b) Kushamwaridzana nevarwere vane chirwere chinotapukira chinotapurwa nemadonhwe.
c) Kuita mashoma-kure-mashoma mashandiro akadai se tracheotomy uye tracheal intubation kune varwere vane chirwere chisingaperi chechirwere chekufema. Kana iropa, mvura yemuviri uye makumbo emurwere anogona kusaswa, mask yekudzivirira yakazara inofanira kushandiswa.
2. Tarisa uone kukuvara usati wapfeka uye kusunungura chishandiso. Cheneswa uye utachiona mushure mekushandisa imwe neimwe.
Kurapa kwekushanda kwakawanda kwakagadzirwa malenzi uye mafuremu, uye hapana chakakosha chinodiwa chemafirita zvinhu. Yakagadzirwa nekushandisa optical resin, polycarbonate (PC) kana polymethyl methacrylate (acrylic) sema lens zvinhu, uye nekuwedzera yakasarudzika maziso ekrisimasi senge anti-bhuruu mwenje, anti-ultraviolet, anti-optical radiation, uye anti-pesheni, uye yakasarudzika yakasarudzika maitiro. .
Hot Tags: Goggle, Vagadziri, Vagadziri, Huru, Fakitori, Tenga, China, Yakagadzirwa muChina, Mutengo, Mutengo weChidimbu, Quotation, CE, FDA
magirazi endamagirazi ekudzivirira anoendaZiso rinotasva Gogikuchengetedza magiramu ekushandiswa kwekurapagoggles medicaldziviriro gogokudzivirira goggles kurapwa3m gogs zvekurapasafe goggle
Pamba Swab uye Pamba Bhora